१० वर्षे बालिका जो यतिबेला यू ट्युबमा निकै चर्चामा छिन् । कतिपयले उनले निर्माण गरेका भिडियो हेर्नु भएको पनि होला । उनी हुन् भारतीय बालिका अन्नत्या । उनको यू ट्युब स्टारका रुपमा स्थापित भएको कथा निकै रोचक र मर्मस्पर्सी छ । आफ्नो यू ट्युब च्यानलनमा ३० लाख भन्दा बढी सब्सक्राइबर बनाउन सफल अन्नत्या कसरी MyMissAnand बनिन् ?
उनी कति बेला भिडियो सुट गर्छिन,कसरी विषयवस्तु चयन गर्छिन,कति बेला स्किृप्ट लेख्छिन् र कसरी सम्पादन गर्न भ्याउछिन् ? छोटो अवधिमा उनी कसरी यू ट्युब स्टार बन्न सफल भइन् ? अन्नत्या भारतको नोयडामा बस्छिन् । उनका बुवाले पनि पहिले यू ट्युब च्यानल चलाएका थिए । त्यही बेला आमा–बुवाले अन्नत्याका लागि यू ट्युब च्यानल खोल्ने बिचार गरेका हुन् । क्यामरामा अन्नत्याको हावभाव एकदमै सुट हुन्थ्यो ।
चार वर्षको उमेरमा उनले पहिलो भिडियो बनाइन् । बिस्तारै च्यानलका सब्सक्राईबर बढ्दै गए । उनका स्टोरी बालबालिका बीच चर्चित बन्दै गए । ६ वर्षपछि उनी यू ट्युबमा ३० लाख सब्सक्राइबकी धनी भएकी छिन् । ‘लिटिल क्विन’ अर्थात यू ट्युब च्यानलकी स्टार । यू ट्युब प्रयोग कर्ता धेरैले उनलाई चिन्छन् । उनका भिडियो कति हिट भए नभएको उनी हेर्दिनन् । उनका आमाुबवाले त्यसको लेखाजोखा गर्छन् ।
यू ट्युवमा भिडियो हाल्ने बित्तिकै उनी सबैभन्दा माथि हुन्छिन् । अहिले उनी पाँच कक्षामा पढछिन् । उनको पढाईमा पनि राम्रै छ । एउटा भिडियो बनाउन उनले करिब ५–८ घण्टा समय सुटिङमा खर्चन्छिन् । त्यसपछि शीर्षक चयन, स्क्रिप्ट लेखन,एडिटिङतर्फ जुटछिन् । भिडियो रिभ्यू चाहिँ आमा र फुपाले गर्छन् । उनले भिडियो निर्माण गर्न एउटा व्यवसायिक समचार कक्षमा झैं पूरै टिम खटाएकी छन् ।
यस्तो छ, उनको भिडियो बनाउने तरीका
प्रकाशित १२ जेठ २0७६ , आइतबार | 2019-05-26 10:42:43